Fanajana ny zon’olombelona : Natolotra androany ny Fonjaben’i Fianarantsoa
Published Date: 9 octobre 2021
Anaty Velirano faha-3 nataon’Andriamatoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ny lafiny fandriam-pahalemana sy ny fanajana ny zon’olombelona. Mandroso ny ezaka. Tontosa androany Sabotsy 9 Oktobra 2021 teto amin’ny Fokontany Volamena, Kaominina Ambalakely, eto Fianarantsoa ny fanolorana ny Fonjabe vaovao sy manara-penitra, izay mahazaka hatramin’ny voafonja 1.000 isa. Nanolotra fiara iray avy amin’ny tenany manokana mba hitaterana ireo voafonja ihany koa ny Filoham-pirenena Malagasy.
Tanjona ny haha-toerana fanarenana sy fanabeazana ary fanajana ny zon’olombelona ny fonja, fa tsy ho toerana fanasaziana fotsiny ihany, satria hisy amin’izy ireo no hiverina eny anivon’ny fiaraha-monina rehefa vita sazy, na koa voatsara. Na dia mifonja ary izy ireo dia manana zo, hoy Andriamatoa Filohan’ny Repobikan’i Madagasikara tanaty lahateny nataony.
Ho an’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza, dia tarigetra ny fahatrarana ny taha 70/30 mialoha ny faran’ny taona, sy hanenana ny isan’ny voafonja ary ny fanavaozan-drafitra sy fanohanana ny Fandraharahana ny Fonja.
Ankoatra izay, dia nisy ny fanaovan-tsonia fifanarahana niarahany tamin’ny Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Ambalakely. Fifanarahana miompana amin’ny fanomezan’ny Ministeran’ny Fitsarana ny ampahan-tany efa misy ny “Lycée” ho na’ny Kaominina, izay tafiditra ao anatin’ny velaran-tany tokony ho an’ny Ministera. Dingana manaraka araka izany ny famitana “titre” sy fametrahana “borne” amin’ity “Lycée” ity.